Garmalka oo xabsi ku xukumay laba qof oo la sheegay inay ku biireen Kooxaha xag jir ah ee ka dagaalama Soomaaliya, iyo Suuriya. – Xeernews24
Garmalka oo xabsi ku xukumay laba qof oo la sheegay inay ku biireen Kooxaha xag jir ah ee ka dagaalama Soomaaliya, iyo Suuriya.
28. Oktober 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Maxkamad sare oo ku taal magaalada Frankfurt ayaa laba nin ku xukuntay kiis gaar ah oo ay ugu biiraan dagaalyahannada xagjirka ah ee Soomaaliya iyo Suuriya.
Nin u dhashay Jarmalka oo asal ahaan Soomaali ah, oo la aqoonsaday kaliya 29 jir Abshir A., ​​ayaa lagu helay dambi ah inuu xubin ka yahay koox argagixiso oo ajnabi ah oo ka barbar dagaalamayay al-Qaacida xidhiidh la leh Al-Shabaab.
Maxkamad ku taalla magaalada galbeedka Jarmalka ayaa xabsi daa’in ku xukuntay laba sano iyo toban bilood.
Maxkamad isku mid ah ayaa xukuntay maxkamad ku taalla Turkiga Ozkan C., oo ah 29 jir, laba sano iyo sideed bilood oo lagu soo biiray maleeshiyaadka Junud Al-Sham ee Suuriya.
Xaaladda koowaad, ee maxkamad ayaa sheegtay in eedeysanaha Muqdisho ku dhashay ee Jarmalka uu ka tagay Soomaaliya sannadkii 2012-kii kadib markii uu xag-jir ahaa oo uu ku biiray kooxda xagjirka ah illaa iyo horraantii 2014-ka.
Waxa uu ku dhawaad ​​afar bilood ku qaatay tababarka dagaalka ka dib markii uu yimid, xilligaas oo ay maleeshiyaadka al-Shabaab ay bartay sida loo maareeyo hubka una shaqaaleeysan xeeladaha dagaalka, sida lagu sheegay bayaanka maxkamadda.
Markii dambe waxaa loo diray saldhigga Al-Shabaab laakiin wuxuu ka tagay “wax yar ka dib dhibaatooyinka caafimaad,” ayaa intaa raaciyay.
Hase yeeshee, wuxuu ku hadhay Soomaaliya ilaa uu ku laabto Jarmalka sannadkii hore markii lagu xidhay garoonka diyaaradaha.
Dacwad lagu oogayaasha ayaa diiday in ay ka qayb qaateen dagaal kasta oo Soomaaliya ka dhaca, halkaas oo Al-Shabaab ay doonayso in ay afgambiso dowladaha caalamka taageersan ee Soomaaliya.
Maxkamad ayaa sheegtey in Ozkan C. uu xaaskiisa u raacay xaaskiisa 2013-kii si uu ugu biiro Junud Al-Sham, oo qaar badan oo ka mid ah dagaalyahannadoodu ay mar dambe u baxsadeen Daesh.
Maxkamaduhu waxay heleen tababarka hubka waxayna barteen carabiga xagjiriin kale oo Jarmal ah, ayay maxkamaddu sheegtay.
Waxa uu ku laabtay Jarmalka dabayaaqadii 2013 waxaana la soo xidhay sannadkii hore.
Maxkamadaha jarmalka ayaa xabsiga dhigay tiro ka mid ah kooxaha xagjirka ah ee xubinimadooda lagu soo helo argagixisada dibadda.
Shan nin ayaa lagu xukumay xabsi gaadhaya ilaa shan sano sannadka 2016-ka markii uu ku biiray al-Shabaab ee Soomaaliya.
Xaalad kale oo sanadkaas ah, maxkamad ayaa saddex dhallinyaro Jarmal ah ku xidhay muddo afar sano iyo badh ah markii ay ku biirtay dagaalyahannada xagjirka ah ee Syria sannadkii 2013.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/10/ger-po.jpg 395 650 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-10-28 10:21:422017-10-28 10:21:42Garmalka oo xabsi ku xukumay laba qof oo la sheegay inay ku biireen Kooxaha xag jir ah ee ka dagaalama Soomaaliya, iyo Suuriya.
Daawo Waxa Dhici Kara Hadii Shidaalku Dunida Ka Dhamaado. Deg Deg:Cabdiraxmaan Cirro Weerar Lagu Qaaday Aqalkiisa iyo khasaaraha Ka D...